Daawo:- Aragtida Shacabka Muqdisho iyo xilka qaadisii Kheyre - Radio Risaala: Somali News Online
Home Maqal & Muuqaal Daawo:- Aragtida Shacabka Muqdisho iyo xilka qaadisii Kheyre
25-kii Bishaan Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa kulan ay yeesheen Gudoomiyaha Golaha waxaa uu sheegay in xilkii laga qaaday Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya xasan Cali kheyre oo xilkaasi haayay Saddex sano iyo lix bilood.
Hadal-heyn badan iyo in laga soo horjeesto xilka qaadistaas ayaa bilaabatay,waxaana dadka kasoo horjeestay tallaabadaas kamid ah qaar kamid ah Madaxda Dowlad goboleedyada, Siyaasiyiinta mucaaradka iyo Madasha Xisbiyada Qaran.
Hadaba xilka qaadistii Ra’iisul Wasaare Kheyre sidee ayay u arkaan Shacabka Muqdisho.
Halkan Ka Daawo Warbixinta Warkaan iyo Cali Xasan Cali.
Previous articleMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo soo gaaray Muqdisho
Next article(WARBIXIN) Ridistii Xukuumaddii Kheyre muddo kororsi ma u sahli kartaa Farmaajo?